Jesosy - fahendrena manokana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-02 > Jesosy - ny fahendren'ny olona
Teo amin’ny faha-roa ambin’ny folo taona i Jesoa dia nahatalanjona ireo mpanora-dalàna tao amin’ny Tempolin’i Jerosalema tamin’ny alalan’ny fifampiresahana ara-teolojia tamin’izy ireo. Talanjona ny tsirairay tamin’ny fahalalany sy ny valin-teniny. Nofaranan’i Lioka tamin’izao teny izao ny fanazavany: “Ary Jesosy nitombo fahendrena sy fahanterana ary fahasoavana tamin’Andriamanitra sy ny olona.” (Lio. 2,52). Nampiseho ny fahendreny ny zavatra nampianariny. «Niteny tao amin’ny synagoga Izy tamin’ny Sabata, ka talanjona izay nandre azy. Nifanontany izy ireo hoe avy taiza no nahazoany an’izany? Inona no fahendrena nomena azy? Ary voalohany indrindra, ny fahagagana rehetra izay mitranga amin'ny alalany!" (Markus 6,2 Baiboly Vaovao Tsara). Nampianatra fanoharana matetika i Jesoa. Ny teny grika nadika hoe “fanoharana” ampiasaina ao amin’ny Testamenta Vaovao dia fandikana ny teny hebreo ilazana ny “ohabolana”. Tsy vitan’ny hoe mpampianatra teny feno fahendrena i Jesosy, fa nanana fiainana araka ny bokin’ny Ohabolana koa izy nandritra ny fanompoany teto an-tany.
Ao amin'ity boky ity dia miatrika ireo karazana fahendrena telo izahay. Misy ny fahendren Andriamanitra. Ny Ray any an-danitra dia tsy manam-paharoa. Faharoa, misy fahendrena eo amin'ny olona. Midika izany ny fanekena ny fahendren'Andriamanitra sy ny fanatontosana tanjona napetraka araky ny fahendreny. Misy endrika iray hafa fahendrena izay vakiantsika ao amin'ny Bokin'ny Ohabolana.
Voamarikao angamba fa matetika no asehon’ny olona ny fahendrena. Toy izany no nihaonany taminay ao amin’ny Ohabolana 1,20-24 amin'ny endrika vehivavy ary miangavy mafy antsika eny an-dalana mba hihaino azy tsara. Any amin'ny toerana hafa ao amin'ny Bokin'ny Ohabolana dia manao fanambarana izay tsy natao afa-tsy na ho an'Andriamanitra ihany izy. Ohabolana maro no mifanitsy amin’ny andininy ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona. Ireto ambany ireto misy safidy kely:
Tamin’ny voalohany ny Teny, ary tao amin’Andriamanitra (Jao 1,1),
Nanana fahendrena hatrany am-piandohana ny lalany ny Tompo (Ohab 8,22-23),
Ny teny dia tao amin’Andriamanitra (Jao 1,1),
Teo amin’Andriamanitra ny fahendrena (Ohab 8,30),
Ny teny dia mpiara-mamorona (Johanes 1,1-3),
Ny fahendrena dia niara-namorona (Ohabolana 3,19),
Kristy no fiainana (Jao 11,25),
Mamelona ny Fahendrena (Ohab 3,16).
Hitanao ve ny dikan'izany? Tsy i Jesosy ihany no hendry sy nampianatra fahendrena. Izy no fahendrena! Manome porofo fanampiny momba izany i Paoly: “Fa amin’izay nantsoin’Andriamanitra, na Jiosy na jentilisa, dia mampiseho ny tenany ho herin’Andriamanitra sy fahendren’Andriamanitra i Kristy.” (1. Korintiana 1,24 Fandikan-teny Genève Vaovao). Noho izany ao amin'ny bokin'ny Ohabolana dia tsy ny fahendren'Andriamanitra ihany no atrehantsika fa ny fahendrena dia Andriamanitra.
Mihatsara kokoa ny hafatra. Jesosy dia tsy hoe fahendrena fotsiny, fa ao amintsika koa Izy ary ao aminy isika (Jaona 14,20; 1. Johannes 4,15). Fanekena akaiky izay mampifandray antsika amin’Andriamanitra telo izay iray no resahina, fa tsy hoe miezaka ny ho hendry toa an’i Jesosy. Jesosy Kristy mihitsy no velona ao anatintsika sy amin’ny alalantsika (Galatianina 2,20). Manampy antsika ho hendry izy. Miseho eny rehetra eny ao anatintsika lalina indrindra izy io, tsy amin’ny maha hery fotsiny, fa amin’ny maha fahendrena koa. Mampirisika antsika i Jesosy mba hampiasa ny fahendreny ao anatin’ny toe-javatra rehetra misy antsika.
Fahendrena mandrakizay, tsy manam-petra
Sarotra ny mahazo azy io, fa ny mahagaga dia ny kafe dite mafana dia afaka manampy antsika hahalala azy tsara kokoa. Ho fanomanana dite izany dia manantona kitapo dite ao anaty kaopy isika ary manondraka rano mafana mangotraka eo amboniny. Miandry mandra-pisotro tsara ny dite izahay. Mandritra io fotoana io, mifangaro ny singa roa. Hoy ny olona taloha nilaza hoe: "Manomana fanavoazana aho", izay taratry tsara ny dingana vita. Ny "pour" dia fifandraisana amin'ny vondrona iray. Rehefa misotro ny dite ianao dia tsy mandany ny dite dia mamela azy ireo; mijanona ao anaty kitapo izy ireo. Misotro "rano dite" ianao, ilay rano tsy misy tsirony mifangaro amin'ny ravina dite manitra ary afaka hankafizanao amin'ity taratasy ity.
Ao anatin'ny fanekem-pihavanana amin'i Kristy isika dia mandray ny endriny ara-batana fotsiny toy ny rano tsy maka endrika ravina dite. Jesosy koa dia tsy manavaka ny maha-izy antsika, fa mampifandray ny fiainantsika olombelona amin'ny fiainany mandrakizay tsy azo ihodivirana, koa mijoro ho vavolombelontsika amin'ny fomba fiainantsika manoloana an'izao tontolo izao. Isika tafaray amin'i Jesosy Kristy, izay midika fa ny fahendrena mandrakizay tsy manam-petra mampiray antsika.
Hoy ny Kolosiana: “Ao amin’i Jesosy no iafenan’ny haren’ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra” (Kolosiana). 2,3). Ny takona dia tsy midika hoe afenina, fa vao maika angoniny ho harena. Nosokafan’Andriamanitra ny saron’ny vata ary mamporisika antsika hanompo izay ilaintsika araka izay ilaintsika. Ao daholo izany. Efa vonona ho antsika ny haren'ny fahendrena. Ny olona sasany kosa dia miandrandra zava-baovao hatrany ary manao fivahiniana masina avy amin’ny kolontsaina na traikefa iray mankany amin’ny manaraka mba hahitana ny haren’ny fahendrena izay voatahiry izao tontolo izao. Fa Jesosy efa vonona ny harena rehetra. Izy irery ihany no ilaintsika. Raha tsy misy azy isika dia adala. Mitoetra ao aminy ny zavatra rehetra. Mino izany ve ianao. Angataho ho anao izany! Raiso ity fahamarinana sarobidy ity ary raiso ny fahendrena amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina ary tongava hendry.
Eny, Jesosy dia nanao ny rariny ho an'ny Testamenta Vaovao sy ny Testamenta Taloha. Izy no nahatanteraka ny lalàna sy ny mpaminany ary ny soratra masina (fahendrena). Izy no fahendren'ny soratra masina.